Kwangexesha elide uJulia Vysotskaya wenqaba ukuqala iphepha lakhe kwi-Instagram network. Emva kwengozi eningizimu yeFransi, xa intombi yomdlali we-actor Masha Konchalovskaya yawela kwi-coma, uJulia waqala ukuphepha ukuthetha ngobomi bakhe. Umlingisi njengokungathi ufihla kwindawo encinci, ukukhusela intsapho yakhe ingqalelo.
Kancinci, lo mfazi wafumana amandla okubuyela ngendlela eqhelekileyo yobomi. UVysotskaya uhamba ngokukhawuleza, ususwe, uvela ekukhanyeni kwaye unokufumana nephepha lakhe kwintanethi yentlalo ekupheleni konyaka we-2016.
Ibhulogi uJulia Vysotskaya iyahluke kwiifrik-pages eziqhelekileyo zamaphephandaba. Umfazi kaAndrei Konchalovsky akangabhengezi kwi-Instagram yakhe, akafaki ukupapashwa kwezithuba, akayikushicilela izityhilelo ezivelayo.
Kwiphepha lebhulogi kaVysotsky ungayithanda indlela yakhe yokucoca, ufunde malunga neendima ezintsha zomdlali we-actress, yabona izibhengezo ezinqabileyo ukusuka ekudutshulweni.
Ifoto yomntu oneminyaka engama-44 ubudala uJulia Vysotskaya kwi-swimsuit yabangela umsindo wabathengi be-actress
Imifanekiso emitsha yaseYulia Vysotskaya kwakukho isithombe esitsha. Emfanekisweni, owenziwe ngumlingane womdlali, uyabhalwa kwi-swimsuit. Kwaye iVysotskaya imele ibuyele kwi-photographer kwaye ingekuphela kwesinye igumbi.
Umfanekiso ongenasiphelo ngokukhawuleza wakhangela umdla we-intanethi. U-Julia Vysotskaya wayefaniswa noAnastasia Volochkova , oye waxhalabisa abalandeli bakhe ngezithombe ezifanelekileyo:
aleksandravolokh Ewe, sele usenanto. Yonke into yayihle kakhulu kwiphepha lakho.
kzzahar1 nje ndambona uVolochkov ngendlela efanayo ... kwaye uya khona ...
I-irina_lev.70 Hmm ... Ndiyakuhlonela wena uJulia kwaye wonke umntu uyazi ukuba ulungile kumacala onke. Kodwa lesi sithombe asizange sibe nemvakalelo emnandi. kwamehlo amaninzi umgangatho wokungcola, ukomoya kunye nezinto ezilungileyo.
irina8916549 Kwaye kutheni? Ngaba ulahlekelwa ngumyeni?
lyubov.filimonova Kwaye kutheni, kwaye ujonge ntoni?
Abafana bakaJulia Vysotskaya bema ngenxa yokuthanda kwabo, beqaphela ukuba wayenomfanekiso omhle, kwaye ukuthelekiswa nemifanekiso engcolileyo kaVolochkova ayifanelekanga. Kwaye ucinga njani - iifoto kwiimpahla zokubhukuda ziyamkeleka kwiinkwenkwezi?
Umshicileli wexesha elizayo u-Anastasia Kostenko uhleka ngokungafundi
Iphunga elimnandi lisuka emlonyeni. Yintoni endiyenzayo?
Ukuba umntwana ushushu ngelilanga
Indlela yokufumana i-tan enhle yolwandle
I-cutlets cutlets ngaphandle kwamaqanda